नेपालको हकमा-विश्वकप सपना ,अझै कोसौँ टाढा » खबरहरुको एउटै केन्द्र
नेपालको हकमा-विश्वकप सपना ,अझै कोसौँ टाढा
सोमबार, जेष्ठ २८, २०७५ १३:२२ मा प्रकाशित !
काठमाडौँ, जेठ २८- विश्वकपको माहोल सुरु भैसकेको छ। रसियामा हुन लागे पनि नेपालका शहरी गल्ली र चोकहरूमा पनि विश्वकपको रौनक कम छैन। तर सहभागिताको दृष्टिले हेर्ने हो भने रुस भौगोलिक रूपमा जति टाढा छ नेपालको विश्वकप यात्रा त्यो भन्दा पनि निकै टाढा छ। नेपालले विश्वकपमा आफ्नो सर्वाधिक माथिल्लो अनुभवका रूपमा एसियाली छनोटमा दोस्रो चरणसम्म आफूलाई पुर्‍याएको छ। जब कि फाइनल चरण छनोटका लागि चौथो चरणसम्मको यात्रा तय गर्नु पर्छ।
नेपालले सन् १९७० मा फिफाको सदस्य बनेको १६ वर्षपछि पहिलो पटक १९८६ मा विश्वकप छनोट खेलेको थियो।त्यसयता ७ पटक विश्वकप छनोट खेल खेलेको छ तर, उपलब्धि शून्य । विश्व फुटबलमानै एसियालाई धेरै कमजोर रूपमा हेरिने गर्छ। नेपाल तर कमजोर देशहरूको बिचमा पनि नेपाल थप कमजोर छ। त्यसैले विश्वकप सपना नेपालको हकमा अझै कोसौँ टाढा छ। छनोटमा सहभागिता हुन थालेयता दुईपटक आन्तरिक कारण देखाउँदै सन् १९९४ र २००६ मा विश्वकप छनोट नखेलेको नेपालले सातौँ पटकको विश्वकप छनोट चरणमा खेल्दा ३० खेलमा अहिलेसम्म १०० गोल खाएको छ भने विपक्षीको पोस्टमा २२ गोल मात्र गरेको छ। छनोट चरणमा नेपाल दक्षिण कोरिया र जोर्डनसँग सर्वाधिक ठूलो अन्तरका रूपमा ९-० को विशाल हार बेहोरेको छ।
जितको कुरा गर्दा मकाउविरुद्ध ६–१ र इस्ट टिमोरविरुद्ध ५-० को नतिजा एेतिहासिक मानिएको छ। विश्वकप छनोट चरणमा नेपालले इतिहास रच्न सफल छनोटका रूपमा २०१४ को विश्वकप छनोटलाई मान्न सकिन्छ। नेपाल पहिलोपटक एसियाली छनोटको दोस्रो चरणमा पुग्दा कमजोर मानिएको इस्ट टिमोरसँग खेलेको थियो। कप्तान सागर थापा र प्रशिक्षक ग्राहम रोबर्टको प्रशिक्षणमा नेपालले इस्ट टिमोरलाई हराउँदै दोस्रो चरण स्थान सुरक्षित गरेको थियो। फुटबलमा निकै कमजोर इस्ट टिमोरसँग फुटबल मैदान नभएकाले एएफसीले दुवै लेग दशरथ रंगालामा गराएको थियो। पहिलोे लेगमा नेपालले इस्ट टिमोरलाई २–१ ले पराजित गर्दा अनिल गुरुङ र जुमानु राईले गोल गरेका थिए। दोस्रो प्ले अफमा नेपालले इस्ट टिमोरमाथि ५–० को शानदार जित निकाल्यो।
दोस्रो लेगमा अनिल, जुमानु, जगजीत श्रेष्ठ, शिव श्रेष्ठ र भोला सिलवाल गोल गर्दै नेपाललाई दोस्रो चरणमा पुर्‍याए। तर दोस्रो चरण नेपाली खेलाडीका लागि सधैँ सम्झन लायक हुने छ किनकि जोर्डनले नेपाललाई गोलको वर्षा गर्दै घर पठाएको थियो। त्यसवेला जोर्डन एसियाली बरीयतामा शीर्ष १० मा थियो। एसियाकै एक बलियो राष्ट्रविरुद्ध नेपाल पुरापुर निरीह रह्यो। जोडर्नमा भएको पहिलो लेगमा नेपाल ९-० ले पराजित भयो। नेपालले तेस्रो चरण स्थान सुरक्षित गर्न काठमाडौंमा हुने दोस्रो लेगमा १०-० ले हराउनुपर्थ्यो ।
जुन एक हिसाबले अकल्पनीय नै थियो। दोस्रो लेगमा भीषण वर्षाले हिलाम्मे मैदानमा खेल्न खप्पिस नेपाली खेलाडीले जोर्डनलाई १–१ को बराबरीमा रोकेपछि नेपाल फेरि चर्चित बनेको थियो। समग्रमा नेपालको विश्वकप सहभागिता अझै कासौं टाढा छ। तर नेपाली मनहरूलाई नेपालको सहभागिता हुनु र नहुनुले फुटबलको क्रेजलाई रोकेको छैन। त्यसैले अाफूलाई मन परेको देशको जर्सीले समर्थकहरू रंगिँदैछन्।
PREVIOUS POST Previous post: थाइराइड के हाे? थाइराइड महिलालाई किन बढी हुन्छ ?जान्नु हाेस
NEXT POST Next post: सुन तस्करीमा संलग्न गोरे,भुजुङ गुरुङ र उनका सालो छिरिङ केन्द्रीय कारागारमा
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते सोमबार, जेष्ठ २८, २०७५ १३:२२
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस सोमबार, जेष्ठ २८, २०७५ १३:२२
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण सोमबार, जेष्ठ २८, २०७५ १३:२२
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी सोमबार, जेष्ठ २८, २०७५ १३:२२
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? सोमबार, जेष्ठ २८, २०७५ १३:२२